I-Fossil Yethula ama-SmartWatch we-Wear OS e-IFA 2019 | Izindaba zamagajethi
I-Fossil ingenye yemikhiqizo ethandwa kakhulu emkhakheni wamawashi ahlakaniphile. Banamamodeli anhlobonhlobo anhlobonhlobo ane-Wear OS, manje ekhulayo ngesikhathi se-IFA 2019. Umkhiqizo usanda kusishiya ngewashi lePuma, yethulwe ngosuku lokuqala lwale IFA. Manje basishiya namamodeli abo amasha ebangeni labo.
Kuzo zonke izimo sithola amawashi asebenzisa i-Wear OS njengohlelo lokusebenza. I-Fossil ingenye yemikhiqizo ekhuthaza kakhulu futhi ebheja kakhulu kusistimu yokusebenza ye-Google yamawashi. Ngaphezu kwemodeli yePuma, basishiya namawashi amabili amasha ezithakazelisayo.
1 Izinsalela zesizukulwane sesihlanu
2 Ukufinyelela kwe-MK Lexington 2
Izinsalela zesizukulwane sesihlanu
Le nkampani isishiya ngakolunye uhlangothi nesizukulwane sesihlanu sewashi laso. Sithola i-smartwatch esiza nemodi yebhethri enwetshiwe, ezosivumela nweba ubude bayo bube bukhulu kakhulu, ngaleyo ndlela sikwazi ukuqhubeka nokuyisebenzisa izinsuku ezimbalwa noma singeke sikwazi ukuyikhokhisa.
Isikrini kule iwashi le-Fossil singamasentimitha angu-1,3 ngosayizi. Njengenjwayelo, i-touch screen, esebenzisa idizayini entsha ye-Wear OS, ngakho-ke ukuzula kulula kakhulu kulokhu. Umthamo wesitoreji uphindeke kabili kulesi sizukulwane esisha nesesihlanu salo mkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, kungeniswa kuyo ukushaja okungenantambo, okungezinye izinto ezintsha ezithakazelisa abasebenzisi. Inesipikha esizosivumela ukuthi senze izingcingo noma siphendule.
Njengoba kujwayelekile kumawashi weFossil, ibhande liyashintshana. Sithola zonke izinhlobo zezintambo ongakhetha kuzo, kanye nezinto eziningi, kusuka ezintambo zesikhumba kuya kwezingabicah. Leli washi lingathengwa manje kuwebhusayithi esemthethweni yenkampani kubizwe ngo- $ 295.
Ukufinyelela kwe-MK Lexington 2
Enye imodeli ngaphakathi kobubanzi be-Fossil yethula ngaphakathi komkhiqizo kaMichael Kors. Basishiya newashi elenziwe ngensimbi engagqwali, eletha ukwakheka okudala ngokwedlulele, ngokungangabazeki okuthakazelisa kakhulu kubasebenzisi abaningi, ngoba kwethulwa njengenketho ongayisebenzisa ezimweni zansuku zonke noma ukwazi ukugqoka isudi.
Iqiniso ukuthi lisishiya nemisebenzi eminingana emisha, efana naleyo yelinye iwashi. Ngokuyinhloko emkhakheni wezigubhu lapho sithola khona izinguquko eziningi kuleli washi kusuka kuFossil. Iza nezindlela ezine zebhethri kuleli cala.
Imodi yebhethri enwetshiwe ekuvumela ukuthi usebenzise iwashi izinsuku ezimbalwa, kepha kuphela imisebenzi yayo eyisisekelo.
Imodi yansuku zonke inikeza ukufinyelela emisebenzini eminingi futhi izogcina isikrini sivuliwe.
Imodi yangokwezifiso noma Imodi yangokwezifiso evumela ukuthi kungenzeka ukuthi kulungiswe ukusetshenziswa kwemisebenzi kuzidingo zakho.
Imodi Yesikhathi Kuphela izobonisa kuphela isikhathi esibukweni, njengewashi elijwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, njengakuwashi le-Fossil, inesipikha esizosivumela ukuthi siphendule izingcingo ngaso sonke isikhathi. Leli washi selivele lethulwe kuwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizo ngentengo engu- $ 350 ngentengo. It angathengwa ngegolide, isiliva, igolide rose noma imibala emibili-tone.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » UFossil wethula ama-smartwatches amasha nge-Wear OS e-IFA 2019
Ama-Ring Linked Devices asivumela ukuthi sixhume wonke amadivayisi wethu we-Ring